Hoy koa ny Papa Fransoa vao tsy ela akory izay : « Zary natao kolo-piainana ny ady sy ny fifamonoana, ka nampidina ambany dia ambany ny maha-olona, sy ny fahasahiranana tsy tambo isaina, ary dia ho lian-drà tsy hahay mifandamina intsony ve isika ?…. Atsaharo amin’izay, fa rahefa mivavaka isika, dia aoka ho fanorenam-piadanana fa tsy ho fandranintana ady no atao » (Angelus, 11 novembre 2018)
• Hamafiso ny finoana an’i Jesoa nitsangan-kovelona, Mpanjakan’izao rehetra izao, nandresy ny herin’ny maizina sy ny fahafatesana. « Ho aminareo anie ny fiadanana », hoy izy. Zary voaary vaovao ao amin’i Jesoa ny olombelona ka miverina amin’ny maha- izy azy.
• Manapotika ny fiainana, tsy afahantsika mivoatra sy mametraka fiaraha-monina mitondra amin’ny fampandrosoana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ny tsy fijoroana amin’ny marina eo amin’ny seha-piainana rehetra. Koa sahia mampanjaka ny marina.
• Adidy masina ho an’ny Ray aman-dreny rehetra ny manampy ny zanany ary ho an’ny olon-dehibe ny manao tantsoroka amin’ny tanora hiatrika ny hoaviny amin’ny alalan’ny fametrahana indray ny soatoavina maha malagasy.
• Hamafisina ny fanomezana toerana ny fifanakalozan-kevitra amim-panajana izay mitondra amin’ny tena marina hikatsahana ny soa iombonana ho an’ny Firenena manontolo. Làlana hahatongavana amin’izany ny Fanabeazana olom-pirenena vanona (education civique). Ilaina ny fifampifehezana hentitra enti-manova ny toe-tsaina efa lasa lomorina.
• Mila ho dinihina tsara ny Lalàm-panorenantsika mba hiorina tsara sy ho matotra ka hanampy ny tsirairay hanana ny tena fitiavan-tanindrazana izay mitaky fahafoizan’aina manontolo.
• Aza ekena mihitsy ny fanapotehana sy fanoloana ny kolontsaina iorenan’ny soatoavana maha malagasy. Halaviro ny fivarotana ny harem-pirenentsika fa masina ny Tanindrazana.